April 2021 – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo: Saaxiibkeyow mar i maqal ka hor inta aadan hor-tegin Baarlamaanka
April 29, 2021 April 29, 2021 Hassan Istiila
Saaxiibow taariikhdu waa isa soo celcelisaa ee aan ku xusuusiyo dhacdo aan xusuusteyda ka go’in. Alle ha u naxariistee Ganacsade Cumar Ganey oo ay Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Alle ha u naxariistee saaxiibbo ahaayeen mudo 50 sano ah ayaa Madaxtooyada ugu tegay Maxamed Siyaad markii ay Muqdisho xabaddu ka billaabatay Dec 1990. Wuxuu ku yiri “Maxamed Siyaadow waxaan saaxiibbo nahay 50 sano, intii aad Madaxweynaha aheydna waligey xil, hanti iyo dan ii gaar ah kuuguma i maan. Maanta waxaa gurigayga iga keenay lexajeclada adiga iyo dalkaba iga kiin heysa, ee…
Kismaayo oo maanta lagu daah-furay qorshaha horumarinta Dowlad-Goboleedka Jubbaland ee 2021/2024
April 29, 2021 Hassan Istiila
Madaxweyne ku-xigeenka 1-aad ee Dowlad-Goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aaden ayaa maanta magaalada Kismayo ku daah-furay qorshaha horumarinta Dowlad-Goboleedka Jubbaland ee 2021/2024. Qorshahaan ayaa ka kooban istaraatiijiyadda horumarinta ee wasaaradaha Jubbaland, taas oo la dejiyo afartii sannadoodba hal mar. Golaha wasiirada Jubbaland, Xildhibaano, Agaasimayayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, ayaa kasoo qeyb-galay daah-furka munaasabadda. Agaasimaha guud ee wasaarada arrimaha gudaha Aaden Faarax Gaarane, oo ku hadlay afka agaasimeyaasha wasaaradaha Jubbaland ayaa sheegay in fulinta qorshayaasha horumarinta ee loo dhan yahay ay si wadajir ah uga qayb-qaadan doonaan dhammaan wasaaradaha…
Ra’iisul Wasaare Rooble oo la kulmay Midowga Musharixiinta, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hir-Shabeelle
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay kulan looga arrinsaday xaaladdaha dalka la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha Midowga Musharixiinta, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hir-Shabeelle. Wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, oo kulanka kaddib la hadlay warbaahinta ayaa yiri. “Ujeedka kulanka waxa uu ahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa amniga iyo deganaanta muqdisho isla markaana looga hortegi karo waxkasta oo keeni kara dhibato.” Madaxda ayaa ka wada hadlay in dalka ay si deg deg ah uga dhacdo doorasho asal u ah heshiiskii 17-kii September, isla markaana dhinacyada oo…
Guddoonka Golaha Shacabka oo beeniyay in xil ka qaadis lagu sameyn doono Ra’iisul Wasaare Rooble
April 28, 2021 Hassan Istiila
Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka ayaa maanta beeniyay wararka sheegaya in maalinta Sabtida xil ka qaadis lagu sameyn doono Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. “Waxaan Ummadda Soomaaliyeed uga digeynnaa in ay ka fogaadaan wararka been abuurka ah”, ayuu yiri Guddoonka. Ujeedka kulanka Sabtiga ayuu ku sheegay in Madaxweynaha JFS Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo uu hor imaan doono mudanayaasha Golaha Shacabka. Tan iyo shalay ayaa la hadal hayay in Baarlamaanka uu ceyrin doono Ra’iisul Wasaaraha, kaddib markii Ra’iisul Wasaare Rooble uu ku dhowaaqay in dalka uu aadayo doorasho, isla markaana uu…
Midowga Musharaxiinta oo madaxweyne Farmaajo uga digay in Ciidamada Qalabka Sida uu u adeegsado danahiisa siyaasadeed
Midowga Musharaxiinta Madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay go’aankii Madaxweyneyaasha Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay uga soo horjeesteen muddo kordhinta labada sanno ee loo sameeyay Madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayey Musharaxiinta uga digeen in Ciidamada Qalabka Sida uu u adeegsado danahiisa siyaasadeed, iyagoona ugu baaqay inay ka waantoobo arrintaas. Hoos ka Akhriso Qoraalka kasoo baxay Midowga Musharaxiinta.
Guddiyada Hergelinta Doorashooyinku oo soo dhoweeyay go’aamada maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Ra’iisul Wasaaraha
Guddiyada Hergelinta Doorashooyinku ayaa soo dhoweeyay go’aamada shalay ay gaareen maamulada Hirshabeelle, Galmudug iyo Raysalwasaaraha xukuumadda Federalka Soomaaliya, ee ahaa in dib loogu noqdo hanaankii doorashada ee ku caddaa heshiiskii 17-Sebteembar-2020. “Wuxuu guddigu u arkaa go’aankaan mid ku soo aaday wakhti muhiim u ah dalka, wuxuuna abuuray xaalad isu Soo dhowaansho, isagoo caddeeyey in dadka Soomaaliyeed awood u leeyihiin in ay xalisan karaan arrimaha dhexdooda yaal.” “Ugu danbayn xalka wadanku wuxuu ku jiraa in doorasho loo dareero, Isla markaana ku salaysan 17- Sebtember. guddiguna wuxuu horeba u diyaariyey dhammaan habraacyadii…
Guddoonka Golaha Shacabka oo iclaamiyay kulan oo caadi aheyn oo uu iman doono madaxweyne Farmaajo
April 28, 2021 April 28, 2021 Hassan Istiila
Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaannada ugu yeeray fadhi aan caadi aheyn oo ay yeelan doonaan maalinta Sabtida. Fadhigan aan caadiga aheyn ayaa waxaa Golaha Shacabka kula hadlaya Madaxweyne Farmaajo, ayaa imaan doona kulanka isaga oona ka warbixin doona xaaladdaha dalka iyo arrimaha doorashooyinka. Xildhibaannada dalka dibadiisa ku sugan iyo kuwa gobolada dalka ku maqan ayaa la faray inay si degdeg u soo galaan Muqdisho, si ay u soo xaadiraan fadhiga aan caadiga aheyn ee maalinta Sabtida. Halkan hoose ka akhriso:-
Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorasho aan shuruudi ku xirnayn
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay si toos ah ula hadlay Shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin in la qabto doorasho aan shuruudi ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii horey loo gaaray ee 17ka Sebteembar 2020, iyo tala-bixintii guddiyada farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyey sida ay uga go’an tahay Dowladda in dalkan ay ka dhacdo doorasho ka tarjumeysa kobaca dimuqraadiyadeed iyo horumarka ay higsanayaan shacabka Soomaaliyeed, balse ay caqabaddu noqotay faro gelin shisheeye iyo gacmo…
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo soo dhoweeyay go’aannadii kasoo baxay Hirshabelle, Galmudug iyo Ra’iisul wasaare Rooble
April 27, 2021 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee BFS Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo dhaweeyay war-murtiyeedka ay soo saareen Dowlad Goboleedyada Galmudug iyo Hir-Shabeelle, kaas oo ay ku diideen muddo korordhintii loo sameeyay hay’addaha dowlada. Sidoo kale Guddoomiyahu wuxuu soo dhaweynayaa war-saxaafadeedkii kasoo baxay xafiiska RW Mohamed Hussein Rooble ee ah in Dalka Doorasho loo jiheeyo Guddooniyahu wuxuu u mahadcelinayaa cid kasta oo kaalin ka qaadatay, waxa uuna ku boorinayaa dhammaan masuuliyiinta in ay qaataan doorkooda masuuliyadeed si dalka loogu jiheeyo doorasho wadar-ogol ah oo ku dhacda jawi nabdoon.
Galmudug iyo Hirshabelle oo diiday muddo kordhinta, kuna baaqay wada-hadal
Maamullada Galmudug iyo Hirshabelle ayaa sheegay inay isla qaateen in Soomaaliya ay si deg deg ah ay u aaddo doorasho oo meesha laga saaro nooc kasta oo muddo kordhin ah. War saxaafadeed wadajir ah oo kasoo baxay labada maamul ayaa lagu sheegay in heshiiskii 17-kii September uu saldhig u noqonayo hannaanka doorashada. “Waxaan ugu baaqeynaa madaxda dowlad goboleedyada kale inay qaataan kaalintooda uga aaddan fulinta heshiiskii 17-ka September si dalka uu u aaddo doorasho lagu heshiiyay,” ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka labada bog ka kooban. Golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya…
Baarlamaanka Puntland oo magacaabaya guddiga doorashada xubnaha Aqalka Sare
Akhriso: Habraaca doorashada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya